Archive ref no: NCA-14615 अभिलेखालय सि. नं.: NCA-14615
कम्प्युटर अ. नं.11387
पीडितको नाम:संजय कोइराला
कार्यालयको नामज्ञानज्योती अंग्रेजी बोडिङ स्कुल, कक्षा २
बाबुको नामकृष्णप्रसाद कोइराला
आमाको नाम:लक्ष्मी कोइराला
नियमित स्वास्थ्य जाँच।
घटनाको पूर्ण विवरण (को, कँहा, कहिले, कसरी, के कारणले, कोबाट, कुन अवस्थामा भएको हो बढी भन्दा बढी विवरण लेखनु हुन अनुरोध छ):पनौती नपा १२ खोपासीका संजय कोइराला २०६१ पुस ५ गते खोपासीमा भएको विस्फोटमा परि गम्भीर घाइते भए। घटनामा उनीसँगै खेलीरहेका सुरज लामाको मृत्यु भयो। अनिश्चितकालिन बन्द सफल पार्न अघिल्लोदिनदेखि माओवादीले बाटोभरी बम विच्छ्याएका थिए। सुरक्षाकर्मीले ती बमहरू निस्क्रिय पार्दापार्दै केही बम निस्क्रिय पार्न भुलेका थिए। बममाथी गाडेको निगालो खेल्नका लागि झिक्दा बम विस्फोट भएको थियो। स्थानियबासीले घाइतेहरुलाइ उद्दार गरी १ महिना ५ दिन शिक्षण अस्पताल काठमाडौंमा उपचार गरिएको थियो। संजयको मुख क्षत्विक्षत भएको छ। बेला बेलामा आँखा नदेख्ने समस्या देखिन्छ। पीडितकाअनुसार उनलाई हालसम्म कसैले सहयोग गरेका छैनन्। आँखा नदेख्ने, पढेको कुरा नसम्झने, लाइनमा बस्दा रिँगटा लागि ढल्नेजस्ता समस्या उनमा देखिएको छ।